Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya oo la wareegtay maamulka xarumihii Nile Academy – Radio Muqdisho
Sadex iskuul iyo isbitaal oo ay Soomaaliya ku la haayeen hey’adda Nile Academy oo lala xiriiriyay ururka dowladda Turkiga ay ku dartay liiska argagaxisada ee uu hogaamiyo wadaadka fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ee Fetullah Gulan ayaa hada waxaa maamulka xarumahaas la wareegay safaaradda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen diblomaasiyiin.
Dowladda Soomaaliya 16 bishan Luulyo waxaa ay joojisay shaqada hey’adda Nile Academy ay ka wadday Soomaaliya markii hey’adda lagu eedeeyay in ay ku lug laheyd afgembigi dhicsoobay ee 15 bishan ka dhacay dalka Turkiga taas oo ka dambeysay codka ka yimid madaxda Turkiga.
Go’aankan ayaa ahaa mid dowladda Soomaaliya ay ku taageereysay xukuumadda Turkiga ee la doortay iyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo la isku dayay in xukunka laga qaado.
Waqtigii loo qabtay shaqaalaha hey’adda Nile Academy in ay dalka kaga baxaan ayaa ku ekaa maalintii Sabtida ee la soo dhaafay.
Dugsi hoose oo ay gabdhaha wax ka bartaan, dugsi sare oo sidoo kale gabdhaha ay leeyihiin iyo dugsi sare iyo isbitaal oo ay hey’adda Nile Academy ayaa hadda waxaa maamul ahaan hos tagaan safaaradda Turkiga ee Soomaaliya taas oo bilaabatay Axaddii shalay, sida ilo muhiim ah ay ku xaqiijiyeen wakaalada wararka ee Anadolu.
Kadib go’aankii dowladda Soomaaliya, 40 ruux oo u shaqeynayay hey’addaas ayaa bilaabay in ay Soomaaliya ka baxaan ayaga iyo qoysaskooda.
Isbitaalka ay hey’adda Nile Academy ay ku laheyd Soomaaliya waa la xirey dhammaan qalabkii yiileyna waxaa lagu wareejiyay isbitaalka weyn ee EX. DIGFEER.
Sida laga soo xigtay degreeto ka soo baxday madaxweynaha dalka Turkiga oo ay daabacday majaladda Gazette maalintii Sabtiga, dowladda Turkiga waxaa ay xirtay 2,000 xarumood oo lala xiriiriyay kooxdii ka dambeysay afgambigii dhicsoobay ee ka dhacay Turkiga 15 kii bishan Luulyo.
Shirka madaxda wadamada Carabta oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya